Cabsi soo wajahday dhalinyarada Muqdisho ee doonayay in ay qeyb ka noqdaan mashruuca shaqo abuurka – Dalkaaga.com
Home / Somali News / Cabsi soo wajahday dhalinyarada Muqdisho ee doonayay in ay qeyb ka noqdaan mashruuca shaqo abuurka
Cabsi soo wajahday dhalinyarada Muqdisho ee doonayay in ay qeyb ka noqdaan mashruuca shaqo abuurka
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa shaaca ka qaaday in shaqo loo abuurayo Kun Dhalinyaro ah oo
kamid ah kuwa kunool Degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana Degmo kasta laga soo qorayaa in ka badan 50-Dhalinyaro ah.
Shaqooyinka loo abuurayo Dhalinyarada ku dhaqan Gobolka Banaadir ayaan wali la shaacin waxa ay noqon doonaan, waxaasa maamulka Gobolka Banaadir shaaciyeen in mushaarka shaqadaasi uu noqon doono lacag dhan 150-Dollar bishii.
Afhayeenka dhanka hawlgalada Ururka Al Shabaab C/casiis Abuu Muscab ayaa uga digay dhalinyarada Muqdisho in ay qeyb ka noqdaan barnaamijka shaqo abuurka gobolka Banaadir wado , waxa uuna tilmaamay in shaqo aysan jirin balse dhalinyaradaasi laga dhigayo Askar Sirdoon ah.
Waxa uu sheegay Afhayeenka in ay beegsan doonaan kuna dili doonana wadooyinka dhalinyarada magaalada Muqdisho ee qeyb ka noqda Mashruucan shaqada loogu abuurayo , waxa uuna uga digay Waalidiinta dhalay dhalinyaradaasi in ay ceshtaan.
Tan iyo markii ay soo baxday Hanjabaada Al Shabaab ayaa waxaa cabsi xoogan lasoo daristay dhalinyaro badan oo damac uga jiray in ay qeyb ka noqdaan Barnaamijkan Shaqo Abuurka ah, waxaa sidoo kale ka laabtay Shaqo abuurkan dhalinyaro horey isku qoray.
Dhalinyaro badan ayaa sheegay in markii hore aysan ku qanacsaneyn Mushaarka bishii la dhiibayo oo ah mid aad u yar hadana ay soo korortay cabsi xoogan oo ku aadan Hanjabaada kasoo yeertay kooxda Al Shabaab.
Magaalada Muqdisho waxaa kunool kumanaan dhalinyaro ah oo kasoo baxay Jaamacadaha iyo Dugsiyada sare ee dalka, dhalinyaradan ayaan heysan wax shaqo ah oo noloshooda ku maareeyaan waxa ayna taa badalkeeda iska joogaan xaafadahooda.
Previous Faah faahino kasoo baxaya dil haweeney ganacsato aheyd Muqdisho loogu geestay
Next AKHRISO: Magacyada 8 – Musharax oo kasoo jeeda hal beel oo ku tartamaya Madaxweynaha Hirshabelle
Waaxda caafimaadka dalka Uganda ayaa ka digtay in uu si aad ah u hooseeyo dhiiga …